၂၀၂၀-၂၁ ဘောလုံးရာသီမှာ မကျဆီနဲ့ ရျောနယျလျဒို ဘယျသူပိုကောငျးခဲ့လဲ? – Sports A2Z
၂၀၂၀-၂၁ ဘောလုံးရာသီပိတျသိမျးခြိနျမှာ ၂၀၀၄ ခုနှဈနောကျပိုငျး မကျဆီနဲ့ ရျောနယျလျဒိုမပါဝငျတဲ့ ပထမဆုံး ခနျြပီယံလိဂျကှာတားဖိုငျနယျကို မွငျတှခေဲ့ရတာဖွဈပွီး နှဈဦးစလုံးဟာ လကျရှိ ကလပျအသငျးတှမှော ဥရောပအောငျမွငျမှုနဲ့ ဝေးကှာခဲ့သလို လကျရှိမှာတော့ နိုငျငံတကာပှဲစဥျတှဘေကျ အာရုံစိုကျကွတော့မှာပါ။
အားပွိုငျမှုတှကေ တရိပျရိပျကလြာပွီလို့ ဝဖေနျမှုတှေ ရှိနခြေိနျမှာ အသကျ ၃၃ နဲ့ အသကျ ၃၆ နှဈဆိုတဲ့ အရှယျတှဟော ကမ်ဘာ့အဆငျ့ကစားသမားတှအေဖွဈ လူငယျပါရမီရှငျတှနေဲ့ ဝငျတှနျးတိုကျပွီး ရငျဘောငျတနျးနဆေဲ အနအေထားမှာ မကျဆီနဲ့ ရျောနယျလျဒိုဘယျသူပိုကောငျးခဲ့လဲဆိုတဲ့ ခြိနျထိုးမှုနဲ့ မေးခှနျးတှကေ ခေါငျးထောငျနဆေဲပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့တရာသီလုံးကို ပွနျကွညျ့ရငျ ပွိုငျပှဲစုံသှငျးဂိုးမှာ မကျဆီ ၃၈ ဂိုးသှငျးယူခဲ့သလို ရျောနယျလျဒိုရဲပ ၃၆ ဂိုးထကျ နှာတဖြားအသာစီးရခဲ့တယျ။ မကျဆီက လာလီဂါ ရှဖေိနပျဆုရှငျအဖွဈ ပီခြီခြီဆုကို ၅ နှဈဆကျ ကွီးစိုးသှားခဲ့သလို ဒါက လာလီဂါသမိုငျးမှာ ပထမဆုံးကစားသမားဖွဈသလို ပီခြီခြီဆု ၈ ကွိမျပွညျ့မွောကျသှားခဲ့တယျ။
ဒါက ရျောနယျလျဒို မခံစားဖူးတဲ့ စံခြိနျဖွဈပမေယျ့ သူကလညျး စီးရီးအရှေဖေိနပျဆုရှငျအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့လို့ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ လာလီဂါနဲ့ စီးရီးအေ ၃ ခုစလုံးမှာ ဂိုး ၁၀၀ ပွညျ့သှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံးဘောလုံးသမားဖွဈလာခဲ့တာက မကျဆီဘယျတော့မှ မတတျနိုငျတော့မယျ့ အရာလညျး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါလညျး မကျဆီကသာ ပိုသာခဲ့တယျ။ မကျဆီက ၁၁ ဂိုးဖနျတီးမှု ပွုလုပျခဲ့တာက ၅ ကွိမျသာ ဂိုးဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တဲ့ ရျောနယျလျဒိုလကျမွှောကျခဲ့ရပွီး အခကျြအလကျအရ ငွငျးမရအောငျကို ရျောနယျလျဒိုက အသငျးဖျောတှကေို ပံ့ပိုးပေးဖို့ ပကျြကှကျခဲ့တာက မကျဆီရဲ့တနျဖိုးကို ပိုထငျသာမွငျသာဖွဈစခေဲ့တယျ။
ရျောနယျလျဒိုက ကိုပါအီတာလီယာဖလားနဲ့ စူပါကိုပါအီတာလီယာနာ(အီတလီစူပါဖလား)တှကေို ရယူခဲ့ပွီး ဆုဖလားအောငျမွငျမှုမှာတော့ ကိုပါဒယျလျရေးဖလားတလုံးသာ ရယူနိငျခဲ့တဲ့ မကျဆီကို အသာစီးရယူသှားခဲ့တယျ။ မကျဆီရဲ့ ဘာစီလိုနာကတော့ ရာသီသိမျးမှ လာလီဂါမှာ ခွခြေျောခဲ့သလို ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ဂြူဗငျတပျဈက အဆငျ့ ၄ အတှငျးဝငျဖို့ နောကျဆုံးပှဲအထိ ရုနျးကနျခဲ့ရတာကတော့ ဘဲစားဘဲခပြေါပဲ။
MOTM ဆု ဘယျသူပိုမြားလဲ?
ပှဲတပှဲအပွီး အကောငျးဆုံးကစားသမား MOTM အဖွဈ မကျဆီက ၂၄ ပှဲအထိ သတျမှတျခံခဲ့ရလို့ ဒါက ရျောနယျလျဒိုရဲ့ MOTM ၈ ပှဲဆိုတဲ့ သာမညောငျည မှတျတမျးထကျ ၃ ဆသာလှနျခဲ့လို့ ပှဲတပှဲမှာ အကောငျးဆုံးကစားသမားအဖွဈ ခွစှေမျးပွနိုငျဖို့ဆို မကျဆီအတှကျ ထမငျးစားရသေောကျသလို လုပျပွနခေဲ့တာကို တှရေ့ခြိနျမှာ ရျောနယျလျဒိုဟာ အသငျးဖျောတှကေ သူ့ကိုဘောလုံးမပေးလို့ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတဲ့ အဝတျလဲခနျးထဲမှာ ပတျရနျရှာနခေဲ့ကွောငျး သတငျးထှကျခဲ့တယျ။
ဒီရာသီမှာတော့ ခြှငျးခကျြမရှိ မကျဆီလို့သာ ဆိုရမယျ့အခြိနျမှာ ရျောနယျလျဒို ပိုလုပျပွနိုငျခဲ့တာက အထငျကရမရှိလှတဲ့ ပွညျတှငျးဖလားတခုသာ အသာရခဲ့ရုံရှိပွီး မကျဆီကတော့ အဘကျဘကျမှာ ရျောနယျလျဒိုကို အသာစီးရယူထားခဲ့တာကို အခကျြအလကျနဲ့ အခိုငျအမာတှခေဲ့ရတာဖွဈသလို ရျောနယျလျဒိုရဲ့ အမာခံတှကေို ခါးသီးစနေိုငျတယျဆိုရငျလညျး မမှားယှငျးနိုငျသေးတဲ့ မကျဆီက ခေါငျးတလုံးပိုမွငျ့နမှေုကို တညျဆောကျထားနိုငျခဲ့တာကို တှရေ့ကွောငျး တငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ။
ZAWGYI: ၂၀၂၀-၂၁ ဘောလုံးရာသီပိတ်သိမ်းချိန်မှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မက်ဆီနဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုမပါဝင်တဲ့ ပထမဆုံး ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးစလုံးဟာ လက်ရှိ ကလပ်အသင်းတွေမှာ ဥရောပအောင်မြင်မှုနဲ့ ဝေးကွာခဲ့သလို လက်ရှိမှာတော့ နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေဘက် အာရုံစိုက်ကြတော့မှာပါ။
အားပြိုင်မှုတွေက တရိပ်ရိပ်ကျလာပြီလို့ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေချိန်မှာ အသက် ၃၃ နဲ့ အသက် ၃၆ နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်တွေဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမားတွေအဖြစ် လူငယ်ပါရမီရှင်တွေနဲ့ ဝင်တွန်းတိုက်ပြီး ရင်ဘောင်တန်းနေဆဲ အနေအထားမှာ မက်ဆီနဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုဘယ်သူပိုကောင်းခဲ့လဲဆိုတဲ့ ချိန်ထိုးမှုနဲ့ မေးခွန်းတွေက ခေါင်းထောင်နေဆဲပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့တရာသီလုံးကို ပြန်ကြည့်ရင် ပြိုင်ပွဲစုံသွင်းဂိုးမှာ မက်ဆီ ၃၈ ဂိုးသွင်းယူခဲ့သလို ရော်နယ်လ်ဒိုရဲပ ၃၆ ဂိုးထက် နှာတဖျားအသာစီးရခဲ့တယ်။ မက်ဆီက လာလီဂါရွှေဖိနပ်ဆုရှင်အဖြစ် ပီချီချီဆုကို ၅ နှစ်ဆက် ကြီးစိုးသွားခဲ့သလို ဒါက လာလီဂါသမိုင်းမှာ ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်သလို ပီချီချီဆု ၈ ကြိမ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တယ်။
ဒါက ရော်နယ်လ်ဒို မခံစားဖူးတဲ့ စံချိန်ဖြစ်ပေမယ့် သူကလည်း စီးရီးအေရွှေဖိနပ်ဆုရှင်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့လို့ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လာလီဂါနဲ့ စီးရီးအေ ၃ ခုစလုံးမှာ ဂိုး ၁၀၀ ပြည့်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်လာခဲ့တာက မက်ဆီဘယ်တော့မှ မတတ်နိုင်တော့မယ့် အရာလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါလည်း မက်ဆီကသာ ပိုသာခဲ့တယ်။ မက်ဆီက ၁၁ ဂိုးဖန်တီးမှု ပြုလုပ်ခဲ့တာက ၅ ကြိမ်သာ ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုလက်မြှောက်ခဲ့ရပြီး အချက်အလက်အရ ငြင်းမရအောင်ကို ရော်နယ်လ်ဒိုက အသင်းဖော်တွေကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာက မက်ဆီရဲ့တန်ဖိုးကို ပိုထင်သာမြင်သာဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ရော်နယ်လ်ဒိုက ကိုပါအီတာလီယာဖလားနဲ့ စူပါကိုပါအီတာလီယာနာ(အီတလီစူပါဖလား)တွေကို ရယူခဲ့ပြီး ဆုဖလားအောင်မြင်မှုမှာတော့ ကိုပါဒယ်လ်ရေးဖလားတလုံးသာ ရယူနိင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီကို အသာစီးရယူသွားခဲ့တယ်။ မက်ဆီရဲ့ ဘာစီလိုနာကတော့ ရာသီသိမ်းမှ လာလီဂါမှာ ခြေချော်ခဲ့သလို ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်က အဆင့် ၄ အတွင်းဝင်ဖို့ နောက်ဆုံးပွဲအထိ ရုန်းကန်ခဲ့ရတာကတော့ ဘဲစားဘဲချေပါပဲ။
MOTM ဆု ဘယ်သူပိုများလဲ?
ပွဲတပွဲအပြီး အကောင်းဆုံးကစားသမား MOTM အဖြစ် မက်ဆီက ၂၄ ပွဲအထိ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရလို့ ဒါက ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ MOTM ၈ ပွဲဆိုတဲ့ သာမညောင်ညမှတ်တမ်းထက် ၃ ဆသာလွန်ခဲ့လို့ ပွဲတပွဲမှာ အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့ဆို မက်ဆီအတွက် ထမင်းစားရေသောက်သလို လုပ်ပြနေခဲ့တာကို တွေ့ရချိန်မှာ ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသင်းဖော်တွေက သူ့ကိုဘောလုံးမပေးလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တဲ့ အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ ပတ်ရန်ရှာနေခဲ့ကြောင်း သတင်းထွက်ခဲ့တယ်။
ဒီရာသီမှာတော့ ချွင်းချက်မရှိ မက်ဆီလို့သာ ဆိုရမယ့်အချိန်မှာ ရော်နယ်လ်ဒို ပိုလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာက အထင်ကရမရှိလှတဲ့ ပြည်တွင်းဖလားတခုသာ အသာရခဲ့ရုံရှိပြီး မက်ဆီကတော့ အဘက်ဘက်မှာ ရော်နယ်လ်ဒိုကို အသာစီးရယူထားခဲ့တာကို အချက်အလက်နဲ့ အခိုင်အမာတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်သလို ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အမာခံတွေကို ခါးသီးစေနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားယွင်းနိုင်သေးတဲ့ မက်ဆီက ခေါင်းတလုံးပိုမြင့်နေမှုကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရကြောင်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။